शुभकामना, नयाँ बर्षको !
निमुखाहरुको 'एउटा आश' बनेर आओस्, नयाँ बर्ष
सुकुम्बासीहरुको 'भरपर्दो बास' बनेर आओस्, नयाँ बर्ष,
भ्रस्टहरुको 'सत्या नाश, बनेर आओस्, नयाँ बर्ष
बिक्रितीहरुको 'खल्लास्' बनेर आओस्, नयाँ बर्ष ।
यो नयाँ बर्ष २०१० ले तपाईंहरुलाई सुख, शान्ति र उन्नतीहरु मात्र दिलाओस्, यही मेरो शुभकामना छ ।
पत्रकार महासङ्घ, गोरखाका सभापति किशोर थापा, टिका बिष्टलाई आक्रमण गर्ने अपराधी पक्रन, सरकारलाई "हतकडि" प्रदान गराउन,प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई "हतकडि" बुझाउदै,
फोटो साभार : अमेरिका दर्पण
हरे ! नेपालको कानुन,
र यो कसैको हातमा नबाधिंने हतकडि !
मनलाग्दि गर्यो, जेल गयो,
बाधिंदा-नबाधिंदै फुस्कने "आदेशी" हतकडि ।
उमा सिंह मरिन, मारीइन,
अपराधीको हातले देखेन त्यो हतकडि ।
'रणबीरहरु'का शेर ऋशिका हातले सलामी पाए,
महान ती पत्रकार ? ले हेर्नै परेन हत्कडि ।
जति बन्दुक छन्, त्यति त नहोलान,
हाम्रो मुलुकमा हतकडि ।
अशान्ती बन्दुकका नालहरु पड्किन्छन्,
तर खियाले खान्छ, त्यो हतकडि ।
नाबालकहरुको हातमा मज्जाले जेलिन्छ,
नयाँ नेपालको हतकडि ।
टिका बिष्ट कुट्नेहरुलाई,
किन चाहियो हतकडि ?
प्रयोगमा नआइ लोप हुने भो,
मोबाइल आए पछी, हतकडि ।
ब्वांसाहरुका सभामा, आहा कति मान्छे ?
खाली ताली र थपडि,
तिनैका भरौटे भए पछि,
के काम टिटानस सर्ने त्यो हतकडि ?